အမျိုးသမီး (၄) ဦးအား KIA က အဓမ္မပြုကျင့် ~ အမိမြေ
အမျိုးသမီး (၄) ဦးအား KIA က အဓမ္မပြုကျင့်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အတွင်းရှိ တာလောကြီး ကျေးရွာမှ လူငယ်များအား ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA ၏ ဒေသခံ တပ်ဖွဲ့က စုဆောင်းရေး ခေါ်ယူသွားပြီး အမျိုးသမီး (၄) ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံရွာသားများက ပြောသည်။
ကျေးရွာအပြင်ဖက်ရှိ မုံညှင်းစိုက်ခင်းမှ ပြန်လာသည့် လူငယ် ၁၂ ဦးအား ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့ ညနေက ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ယခုလ (၈) ရက်နေ့က အမျိုးသမီးများ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်ဟု ဒေသခံ ရွာသားတဦးက အခုလို ပြောသည်။
“မနက်မိုးလင်းတော့ မုံ့ညှင်း သွားနုတ်ကြတယ်။ ညနေ လေးခွဲ ငါးနာရီဆိုရင် အိမ်ပြန်ကြတာပေ့ါ။ အဲဒါ လမ်းမှာဆီးပြီးတော့ ဖမ်းသွားတယ်။ ရွာက (၁၂) ယောက်ပါသွားတယ်လေ။ အဲဒါ မိန်းခလေး (၄) ယောက်တော့ ပြန်လွတ်လာပြီ။ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောတယ်။”
အသက် (၁၅) နှစ် အရွယ်ခန့် မိန်းခလေး နှစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းကလေး နှစ်ဦးတို့ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား တာလောကြီးကျေးရွာ တိုက်နယ် ဆေးရုံ၌ ကုသမှု ခံခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ နေအိမ်ပြင်ပသို့ မထွက်ရဲကြကြောင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှု ဝေဒနာ ခံစားနေပုံရကြောင်း ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
“သူတို့ အခန်းထဲမှာပဲ အောင်းနေကြတယ်။ ကြောင်တောင်တောင်လေးတွေနဲ့ ဘယ်ကိုမှလည်း မထွက် ကြတော့ဘူး။ အဲဒါ တခုခု ဖြစ်မှာစိုးလို့ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ ကြောက်လည်း အရမ်း ကြောက်နေကြပုံပဲ။”
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်း စုဆောင်းရေးဆွဲသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့် အပေါ် တပ်ဖွဲ့က စီစစ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဂွမ်မော် က အစိုးရ စစ်တပ်အား ယခုလို အပြစ်ပုံခဲ့ပါသေးတယ် ..
“စုဆောင်းရေးဆိုတာကတော့ တခါတလေမှာ အစိုးရတပ်က ဖမ်းမှာ စိုးလို့ရှိရင် အဲဒီလူတွေက၊ မိဘတွေကပေ့ါနော်။ KIO က အတင်းအဓမ္မ ခေါ်သွားတာပါဆိုပြီးမှ ထွက်ဆိုတတ်ပါတယ်။ ဒါ အရင်တုန်းက ဗီယက်နမ်တို့ ဘာတို့မှာလည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီအခြေအနေ မှန်တွေ ကတော့ ကာယကံရှင်တွေက ပြောတဲ့ အပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့လည်း စိစစ်နေတုန်းပါပဲ။”
ထို့အပြင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဒေသခံ အမျိုးသမီးများအပေါ် အဓမ္မ ပြုကျင့်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း “ကျနော်တို့လည်း အဲဒါအခု ရှေ့တန်းကို လှမ်းပြီးမှ စစ်နေတယ်ခင်ဗျ။ သတင်းတွေ ထွက်လာလို့လေ။ တခါတလေမှာ ရှေ့တန်းမှာ အဲလိုမျိုး ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတာပဲ။ အဲဒီတော့ ရဲဘော်တွေ မူးပြီိးတော့ ဖြစ်တာတို့ တခါတလေမှာ စိတ်လိုက် မာန်ပါ လုပ်တာတို့ အမှား အယွင်းတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ဒါကို အခု စိစစ်နေတုန်းပါပဲခင်ဗျ။” ဟု ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် ယခုလို ပြစ်မှုမျိုး ကျူးလွန်ပါက KIA က ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းအတိုင်း အပြစ်ပေး အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း စစ်ဆေး နေဆဲ ဟုဆိုသည်။
ယခုကိစ္စအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး KWAT အဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ မွန်းနေလီက မည်သည့် တပ်ဖွဲ့က ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်သည့် လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြောင်း အခုလို ပြောသည်။
“ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေ တစုံတဦး ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ အဲလိုမျိုး အဓမ္မ ပြုကျင့်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျမတို့ အမျိုးသမီး အသင်းအနေနဲ့တော့ လုံးဝကို ရှုံ့ချတယ်ပေ့ါနော်။ (Against) လုပ်တယ်။ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်တယ်။”
ဒေသခံများ အနေဖြင့် KIA တပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပါက အစိုးရတပ်ဖွဲ့၏ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးမှုများ ခံကြရသလို မင်္ကာမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသည့် ဖြစ်ရပ်များ ယခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အပေါ် ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးကို ကြောက်ရွံ့နေရသည်ဟုလည်း ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
အလားတူ ယခု တကြိမ်တွင်လည်း ကာယကံရှင်များအား အစိုးရစစ်တပ်မှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် လာနိုင်သလို KIA ဖက်မှ ရန်ပြုလာမည်ကိုလည်း ကြောက်ရွံ့နေသည့်အတွက် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရန် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO တို့ (၈) လကျော် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ ရပ်စဲရေးအတွက် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တို့ (၆) ကြိမ်ထက်မနည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး သော်လည်း တစုံတရာ သဘောတူညီမှု မရသေးပါ။
တိုက်ပွဲကြောင့် မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော်နှင့် ဗန်းမော်မြို့နယ်များ အပါအ၀င် တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသ များသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်း ခြောက်သောင်းခန့် ရှိပြီဟု လွန်ခဲ့သည့် လ (၁၇) ရက်နေ့ KIO ကထုတ်ပြန်သည့် ကြေငြာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
KIA အနေနဲ့ သူတို့ ပြောနေတဲ့ ကချင်လူမျိုးများအား တကယ်တမ်း ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကချင်ဒေသ တိုးတက် ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် မည်ဆိုပါက အမြန်ဆုံး အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းနှင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်ပြီး ကချင်တိုင်းရင်းသားများ ငြိမ်းချမ်းသာ နေထိုင်ခွင့်ရရေး ဆောင်ရွက် ပေးသင့်ပါသည် . . ယခုတော့ KIA ခေါင်းဆောင်များ၏ အတ္တကြောင့် ကချင်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများမှာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခများ ခံစား နေရပါသည် ။
Labels: KIA အကြောင်း
တစ်ကယ်ဒုက္ခရောက်ကြရတာရှမ်းနီတိုင်းရင်း သားတွေပါ ကချင်အမျိုးသားတွေကစစ်သား လုပ် အမျိုးသမီးနဲ့ခလေးတွေကဒုက္ခသည်စခန်း မှာနေတယ် ရှမ်းနီရွာတွေမှာပြီးစစ်ခင်းကြတယ်
Two Two said...
ဒုက္ခ webပေါ်မှာရေးတင်ချင်လည်း သတင်းကို မှန်အောင်ရေးပါ သေချာစဉ်းစား ဖြစ်နိုင်မှလည်း ပြော ကိုယ့လူမျိုးကိုပြန်မုဒိမ်ကျင့်တာ မရှိဘူး ငါကချင် တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ပါကွာ မုဒိမ်ကျင့်တာ မင်းတို့မုဒိမ်းတပ်ကစစ်ခွေးတွေဘဲလို့ငါထင်တယ်
ဦးဇော်ဇော် ဒေါက်တာစိုင်း မော်ဒယ်များ၏ဓါတ်ပုံအဖြစ်မှန်
ရတနာပုံ အသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ စိုင်းနှင့် သူ၏ ဇနီး လွန်ခဲ့သော ရက်များက ဘောလုံးဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်မှ ဒေါ်စု၏ မန္တလာခရီးစဉ်တွင် ဗထူးကွင်း...
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အတွင်းရှိ တာလောကြီး ကျေးရွာမှ လူငယ်များ...
ချစ်သူများနေ့ နဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ (ဒီပုံတွေက မြန်မာနိုင်ငံစစ်စစ်က ပုံတွေပါ)
ကဲ.. ဒီပုံက အနောက်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်နော်..ရွှေမြန်မာပြည်မှာပါ..ဒီလို လူမြင်ကွင်းေ...
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ချိုနဲ့လား
ယခုအချိန်သည် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးလည်းပြီး ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်များ ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေးများလည်းပြီး၍ ပြည်...
နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု လွယ်ကူချောမွေ့ စွာ ဆက်သွယ် သွားလာနိုင်ရေး အတွက် လမ်းတံတားများအား ဘ...
ဆရာမ မမ ပြောတဲ့ ဦးခင်ညွန့်ဆောင်းပါး ရေးဖြစ်ပုံ
Mizzima — Hot News ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဆရာမ မမ ၏ သောကြာနေ့ထုတ် ဂျာနယ်တွင် “ဦးခင်ညွန့်နှင့် ဒေါက်တာ ခင်ဝင်းရွှေတို့၏ ငြိမ်းချမ်းမှုများဖြင...
ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာနိုင်ငံလည်း မဝေးတော့ပြီ
သိန်းသုံးဆယ်ရရင် ကုန်းမှာပဲဆိုတဲ့ YAK ( ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာနိုင်ငံလည်း မဝေးတော့ပြီ ) ၀မ်းနည်းစရာ အို .. မြန်မာပြည်
အမေစု ပြောတဲ့ မနေနိုင်လို့ ယူလိုက်ရသည်
ရန်ဖြစ်ပြီး သေသွားတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ရဲ့ အညံ့ဆုံး ကျောင်းသား ဖုန်းမော်ကို ဂုဏ်ပြုတယ် ဘာညာနဲ့ အရှုပ်တွေ လုပ်နေကြတဲ့ အသက် 50 ကျော် ကျောင်းသား...
လွယ်ဂျယ်ကိုတိုက်ရန် KIA ဗဟိုက အမိန့်ပေးလိုက်ပြီ
ကချင်(KIA) တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လတ်တလောကျဆင်းနေတဲ့ စစ်ရေးသိက္ခာ ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်ဖို့အတွက် တိုက်ကွက်ဖော်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ လိုင်ဇာမှလာတဲ့ ...
အင်တာနက်ဆိုင်များ ည ၁၁ နာရီ နောက်ဆုံးထား ပိတ်ရမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ကာလ နီးကပ်လာသောကြောင့် ည ၁၁ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ အင်တာနက်ဆိုင်နှင့် ဂိမ်းဆိုင်များ ပိတ်သိမ်းရန် ရန်ကု...
အန်တီ မှားနေတာ ကြာပါပြီကော အန်တီရယ်
စက်တင်ဘာလ ၈ရက်နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ရန်ကုန်ခရော်နီကယ်၏ မေးမြန်းချက်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ရာ ၌ “အ...
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် စစ်ဖက်နှင့် အရပ်ဖက်ဆက်ဆံရေး
ပထမကမ္ဘာဟုခေါ်သော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် တတိယကမ္ဘာဟုခေါ်သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် စစ်ဖက်အပြုအမူနှင့်လောကအမြင်တို့တူညီခြင်း ...
ပြည်သူ+ တပ်မတော်+ တိုင်းရင်းသားပါတီများ+ NLD+ ပြည်ခိုင်ဖြိုး+ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ = ဒီမိုကရေစီ
ငါတို့တွေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အမိအိမ်၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတွေ လူငယ်ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ပါးပါးနေနေရတဲ့အချိန်မှာ မိ...
အမေရိကန်က ခန့်အပ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Derek Mitchell သည် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ The Washington Post သတင်းစာ ၏ မေးမြန်း ချက်များကို ဖြေကြားခြင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ။ ခင်ဗျားကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာဟာ အင်မတန်အရှိန် အဝါ ကြီးတဲ့ သတင်းစာကြီး ဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံေ...
ဆွန်ဇု၏ စစ်ပညာကျမ်း ( မြန်မာပြန် )
Ifile.it ဒေါင်းလော့ ၊ Megupload ဒေါင်းလော့ ၊ up4vn.com ဒေါင်းလော့
Jasprom bbm bergaransi - BBM Murah Jasprom Terpercaya titik fokus. 0823 2825 5980 Jasprom bbm cut-rate bahan bakar diandalkan dalam garansi api | Kami membuat artikel ini untuk peme...
လေးစားထိုက်တဲ့ သူကို လေးစားထိုက်တဲ့ နေရာမှာပဲထားပါ................ - မြတ်နိုးလို့ တဲ့အမှတ်တရသိမ်းထားဖြစ်တယ် ဧည့် ခန်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး ဈေးရောင်း ပွဲတော်မှာ............ ချစ်လွန်းလို့ တဲ့သွားလေရာခေါ်သွားကြတယ် သာယာတဲ့ နေ...
လစ်ဗျားစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားပြီလား - [image: Photo] ကြည်နေ၀င်းမင်း အတွဲ (၁၀)၊ အမှတ်(၃၂) လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ဟောင်း မွမ် မာကဒါဖီအား သစ္စာခံ၍ နောက် ဆုံးခုခံနေသော မြို့နှစ်မြို့အနက် မှတစ်မြို့ဖြစ...
တပင်ရွှေထီး ဘုရင့်နောင်နှင့် ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် (အပိုင်း - ၁)
The Ladyဇာတ်ကားကြောင့် M16နှင့်AK ရိုင်ဖယ်သမိုင်းရှူပ်ပြီ
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆရာတော် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိ - IBEC ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေး စင်တာကို စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးနဲ့ နယ်သာလန် နိုင်ငံ အမ်စတာဒန် မြို့မှာ တည်ထောင် ထား စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး IBEC အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာ...
ဒုက်ခသညျ အရေး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ပူးပေါငျးစလေို - နရေပျစှနျ့ခှာ ဒုက်ခသညျမြား ပွနျလညျ လကျခံရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး မွနျမာနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ကို နိုငျငံတကာက တိုကျတှနျးမှုမြား ပွုလုပျရနျ ...
Casino, ONLINE CASINO, Beste Online Casinos, visitor counter, Online Casino
ABSDF ကျောင်းသားအရှုပ်တော်ပုံ (3)
KIA အကြောင်း (63)
The Lady ဝေဖန်ချက် (3)
စစ်တပ် ဆိုတာ (7)
စိတ်ပျက်မိတယ် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရယ် (1)
စီးပွားပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ (2)
တပင်ရွှေထီး ဘုရင့်နောင်နှင့် ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် (4)
တွစ်တ်တာ(twitter) မှပြန်အလာ (2)
ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အနှစ်သာရများ (1)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းများ (3)
ဘာသာပြောင်းမည်ဆိုသော လူပျက် ဇာဂနာ (1)
လှည်းကူးမှ ကြိုဆိုပုံ (1)
ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ (9)
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုးဂုဏ် (2)
သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းများ (1)
သာသနာတော်ကို ခုတုံးလုပ်ကြသူများ (4)
အလှည့်ကျပေးတဲ့ နိုဘယ်ဆု (1)
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ (2)
အပြောကြီး တဲ့ဇာဂနာ (3)
ပေးစာ ( ၁ ) (1)
ပေးစာ ( ၂ ) (1)
ပေးစာ ( ၃ ) (1)
ပေးစာ ( ၄ ) (1)
ပေးစာ ( ၅ ) (1)
ပေးစာ ( ၆ ) (1)
ပေးစာ ( ၇ ) (1)
နိုင်ငံတောင်သီချင်းကို ပြတ်ရယ် ပြုကြသူများ (1)
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် (1)
သင့်မဲ ဆန္ဒနယ် အတွက် အရည်အချင်း ရှိတဲ့ ဒေသခံ ကိုယ်...
တပင်ရွှေထီး ဘုရင့်နောင်နှင့် ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်...
ဝန်ထမ်းလစာ မတိုးနိုင်သေးဘူးလို့ ဝန်ကြီးတွေ လွှတ်တော...
အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများ အကျိုးသက်ရောက်မှု...
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး မနားတမ်းကြွေးကြော်သူ ဒေါ်အော...
16.02.2012 နေ့ဖတ်ရန်သတင်းများ စုစည်းမှု
ဒေါ်စုသာမရှိတော့ရင် NLD ဘယ်လို ရပ်တည်မလည်း ( ပေးစာ ...
လှည်းကူးမြို့ခံများမှ အမေစုအား ကြိုဆိုရန် ကြိုတင် ...
ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးသမားများအတွက် ( ပေးစာ ၁၄ )
ခေတ်သစ်အောင်ဆန်းဇာနည်ကဗျာ ( ပေးစာ ၁၃ )
ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အသက်၆၇ နှစ်အရွယ် ဒေါ်စု ဟာ ပြီခဲ့တဲ့...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လက်မဲ့ ၁၀၉-၁၁၀ တွေဘာတွေလုပ်...
အမေစု သိစေချင်သည့် ဗိုလ်ချုပ်၏အဓိပ္ပာယ် ( ပေးစာ ၁၂ ...
တောရော မြို့ပါ တန်းတူဖွံ့ဖြိုးရေး မြန်မာနိုင်ငံအတွ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲ ဧပြ...
15.02.2012 နေ့ဖတ်ရန်သတင်းများ စုစည်းမှု
အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုသစ် အမေရိက ထပ်မံချမှတ်...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတပြီး ဂုဏ်သိက္ခရှ...
EC ကော်မရှင်နာ မင်းကြီး Andris Piebalgs က အစိုးရသစ...
ရွှေမှော်ဝန်း လူမှုယဉ်ကျေးကူညီရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ဒါဖတ်ပြီးမှ ငါးထောင်တန်ဖုန်း အိမ်မက် ဆက်မက်ပါ
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေး အကူအညီ...
အင်တာနက်သုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Ytalk Calling စနစ် စတင်...
အမျိုးသမီး သီးသန့်ယာဉ်လိုင်း စတင်စမ်းသပ်ပြေးဆွဲ
ချစ်သူများနေ့ နဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ (ဒီပုံတွေက မြန...
တာမွေကြီး (ခ)ရပ်ကွက်မီးလောင်မှူ ဖြစ်ပွား
ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးနှင့် အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ...
ကမ္ဘာ့ပြဿနာ တရပ်ဖြစ်လာသည့် ဆီးရီးယားအရေး
ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ပြည်တော်ပြန်လာခွင့်ရရှ...
14.02.2012 နေ့ဖတ်ရန်သတင်းများ စုစည်းမှု
၀မ်းသာ၊ ၀မ်းနည်းမိသည် ဒေါ်စုကြည်
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ကို ညှိုးနွမ်းစေတဲ့ ဦးဂမ္ဘီရအတွက်...
“ မသိလို့လား၊ သိလို့လား ”
အပျိုစင်ဘ၀ကိုထိန်းသိမ်းလို့ Valentine Day ကိုဖြတ်သ...
ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တန့် ခိုင်မြဲစေရန် သာသနာ...
စေတနာကို အသိအမှတ် မပြုချင်တောင် မစော်ကား စေချင်ပါဘ...
13.02.2012 နေ့ဖတ်ရန်သတင်းများ စုစည်းမှု
အဂတိလိုက်စား၍ စီရင်ချက်ချမှတ်ထားသော အမှုဟောင်း ၃၀၀ ...
(၆၅) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား နေပြည်တော...
CIA ၀က်ဘ်ဆိုက်အား ဟက်ကာများ တိုက်ခိုက်
ဥရောပသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Andris P...
KIA ၏ ဆိုးရွားလာသော စစ်သားစုဆောင်းရေး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများနှင့် မှတ်...
* ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သတိထားစောင့်ကြည့်ရမည့် ကိုးဘွဲ...
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက...
စစ်ရေးပြပွဲကြီးတစ်ခု ခင်းကျင်းပြသရန် မြောက်ကိုရီးယ...
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကဒ်ပြားများ အလွယ်တကူ ရရှိရန် “...
12.02.2012 နေ့ဖတ်ရန် သတင်းများ စုစည်းမှု
၂၀၁၂-၁၃ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ကျပ် ၆၈၅ ဘီလျံ တိုးမြှ...
စစ်သားနဲ့ ၁၄ ဖေဖေါ်ဝါရီ ( ပေးစာ ၉ )
ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့် ဇာတိ .ကိုယ့် အမိမြေကို ချစ်ကြပ...
ဦးဇော်ဇော် ဒေါက်တာစိုင်း မော်ဒယ်များ၏ဓါတ်ပုံအဖြစ်...
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စွန့်စား လုပ...
သံတွဲ မြို့မဈေးကြီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
EU ကော်မရှင်နာနဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဖို့ရ...
ကျောင်းသားတပ်မတော်က မိတ်ဆွေများကို တောင်းပန်တဲ့စာ...
ရွာသား ၁၄ ဦးကို KIA ကပေါ်တာဆွဲ
အမျိုးသား စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရန် အစီအစဉ် မရှိသေ...
(၆၅)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ နိုင်ငံတော်အလံ အလေြး...
ကေအိုင်အေနှင့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေ...
NLD ၊ ၈၈ ၊ ကျောင်းသားနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများအတွက်...
မူဝါဒဟောင်းမှ သဘောထားများ ပြောင်းရန် နိုင်ငံတော် သ...
ဒေါ်စုအပေါ် အထောက်အထား များနှင့်တကွ ကန့်ကွက်လွှာ တင်သ...
ငါတို့ ဘယ်ချိန်ပစ်တင်မှာလဲဘယ်သူ အရင်ခြေချမလဲ
အမေရိကန် က ပိတ်ဆို့မှု တစ်ခုလျော့ချ ပေး
KNU/KNLA တို့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်ထိန်းမည်
အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေကို လစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့ ပြည်သူ့လ...
ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ( ပေးစာ )
အစိုးရ၀န်ထမ်းလစာများလာမည့် ဘတ်ဂျက်နှစ်မှစ၍ တိုးမြှ...
အစိုးရလက်ထဲတွင် ငွေပို ရှိနေမည်ဆိုလျှင်
ခေတ်သစ်တခု၏ အစ၊ အဓိပ္ပါယ်များ၏ အဆုံး
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲ ဘယ်လို ပေးရမှာလဲ
ထူးချွန် ထက်မြက်သူတို့၏ အလေ့အထ ခုနှစ်ရပ်
လက်နဲ့ထိရုံနဲ့ အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ မီးအ...
မြန်မာအစိုးရနှင့် KNU ငြီမ်းချမ်းရေး ဆက်လက်ဆွေးနွေ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ NL...
ကျပ် သိန်းတစ်ရာဖြင့် ဂျပန်ကားတစ်စီး ဝယ်စီးနိုင်ပြီ...
ရွှေတိဂုံ နှစ် (၂၆၀၀) ပြည့် ပွဲတော်လုံခြုံရေး အထူြး...
အစိုးရသစ်လက်ထက် ငါးဦးစီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုရ
ဒေါ်စု မန္တလေး ခရီးစဉ် ဘာကြောင့်ပျက်
မြန်မာ့တိုင်း ( မ်)
Copyright © 2011 အမိမြေ . All Rights Reserved.